Sheekadii Ugu Xiisaha Badnayd Oo Dr Galaydh iyo Samatar Ku Dhexmartay Mareykanka. | Welcome to Lafweyne.com|
Jan 27, 2018 - Aragtiyood
Samatar: War Cali bal ka warran Hargeysa, waan arkayey inaadan iga danbaynayne
Cali: War hooy Hargaysadu Hargeysadaan aqaannay maaha, reer Sheekh Isaxaaquna kuwaan aqaannayba maaha wuxu maxay ahaayeen.
Samatar: Nimanku weligoodba sidaasay ahaayeene innagaa bad doonanay oo xaqiiqada iska indha tirnay.
Cali: War hooy siyaasaddu meelo daran bay kula gashaaye, dee hadday inoo bixi weyday aan adkaysanno
Samatar: Oo wuxu ma sidanay u dhib badnayd, waa maxay waxan jaahiliinta ah ee aynu wax u doonanay miyaanay ina garanayn inaynu Professor-ro nahay?
Cali: War hooy siyaasaddu inta buugga iyo qalinka lagu dhigto way ka sino ballaadhan tahay, turunturrooyin badanna way leedahaye yaan lagaa garane xammil kaadhka.
Samatar: War nin yohoow wixii dhidid iyo hawl iga baxay, Manifestooyinkan qoray iyo Seminaaradii aan bixiyey, bal maxay igaga beddesheen? Waa maxay waxan saaqidiinta ah.
Cali: War hooy daf-daftaadii waan arkayey, iyo inaad cidla ku soo dhacayso. War hooy nimankan reer Sheekh Isaxaaq aad looma hor ordo. Aqoontaa iyo waxaa aad sheeganayso iyagu ma arkaane, wiil Gadubiirsi ah uun bay kuu arkaan.
Samatar: Waxayagii oo dhan baannu miiska saarnay, xisbigii Hiil Qaran baan cidla kaga tegey, wixii aan soddon sano u ololaynayey baan dhulka ku tuuray, Soomaalinnimadii iyo Xamarba xashiish baan ku sheegay, xaggaan imminka wax ka bilaabaa mustaqbalkayagii, sumacaddayadii iyo magacayagiiba way ku ciyaareen? Xaggaan aadayaa bal wakaase, Xamarna kala dhimanaye?
Cali: War hooy adigu naftaadaad ka hadlaysaaye Dhulbahantoo dhan baan dabka saaray, oo boqollaal wiil u dhinteen, Jilib-jilib baa birta la isaga aslay, degaannadaa aan ka imid inta shantii sano ee u danbaysay sababtayda usoo gaadhay iyo burburka ku dhacay taariikhda intay jireen kuma dhicin. Magaalooyin dhan baa rogmaday, haddana waxaas oo dhan maanta hungaan ka taaganahay. Siyaasaddu kelyo adayg bay u baahan tahay. War hooy hadda halkan waxaan u imid inaan “poltical repositioning” sameeyo fursad baan eegayaa inay meel ka abuuranto ama anigaaba mid abuuraya waan rogaal celinayaa meel ay noqotaba, ama Xamar ha noqoto, ama Hargeysa ha noqoto ama Garoowe ha noqotee, meelina igama xidhanto.
Samatar: Dee bal waayahaye rajaad i gelisaye bal aan wada soconno oo ila soo socodsii markii wax meel uun ka dhaqaaqaan.
Cali: War hooy nin cabanaya iyo nin calool jilicsan toonna wax ma wada galno, siyaasaddu waa khamaare waxaan ku odhan lahaa kama bixi kartide Macallinimadaadaa iska iimaanso. Dhaawaca hadda kusoo gaadhay baan arkaayoo intaa kabadan ma xammili kartide.
Samatar: Horta ninyohoow siyaasaddu waa runtaaye waa “dirty game”. So far I have made two attempts, tii Muqdisho waan kusoo qalbi jabay, tan u danbeyseyna ee Hargaysana I have no words to describe waxaan kala soo kulmay.
Cali: War hooy anigu weligay waan jabayey dagaalka siyaasaddana waan aqaanna mana hadho I will fight to the end. Wiilkaa is mahadiyey ee ina Biixina anaa jac la maaggan, rag is gurayee isagana waxaan leeyahay “wallee karis xumeey adna ku wax li’id”. Waad la socotaayoo kacdoon gudaha ah baa ka jiraa maamulkaas hargeysa waxna waan ogahay warar badanna waan hayaa.
Samatar: Ma laha waxaan maqli doonaa adoo maahmaahdaadii caanka ahayd ugu maahmaahaya Muuse Biixi.
Cali: Taasi teebay ahayd?
Samatar: in badan baan ku qar-qariyee “dabacad”
Cali: War hooy nimankiinaa qodatada ahi maahmaahaha dibida beeraha qodda iyo dameerahaad taqanniine malaha waxaad u jeeddaa “Ku qariyey qariyee Guncad”. Warhooy ammin baa la joogaaye qoladii state department-kana waan la ballansanayaaye nabad gelyo.
Samatar: Haye, haye, haye nabad gelyo.
Qoraa Sare Mohamed Ibrahim
Xogwaraysi Dhexmaray: Galayr & Samatar